Booliska oo faafaahin ka bixiyey Qarax ka dhacay Muqdisho. - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Booliska oo faafaahin ka bixiyey Qarax ka dhacay Muqdisho.
July 8, 2019 admin460
Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Zakiya Xuseen Axmed ayaa faah faahin ka bixisay Qarax ay ciidamada amniga ku fashiliyeen magaalada Muqdisho iyo labo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay bar koontarool oo ay ciidanka ku leeyihiin Seybiyaano ee degmada Hodan.
Sareeye Guuto Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in Hay’adaha amniga oo horay ula socday xogta Qaraxa ay fashiliyeen gaari Qarax oo la rabay in lagu waxyeeleeyo shacabka,wuxuuna dhagar qabanaha isku dayay inuu gaariga xoog ku soo jiirsiiyo goob u xiran ciidamada ammaanka.
“ Hay’adaha Amniga oo xogta qaraxa horay ula socday ayaa maanta fashiliyay qaraxa la rabay in shacabka lagu waxyeeleeyo, dhagar qabaha ayaa is ku dayay in uu gaariga xoog ku soo jiirsiiyo goob u xiran Ciidamada amaanka, waxaa hay’adaha amaanka u suurtagashay in ay xiraan goobtaas shacabkana ay ka fogeeyaan qaraxa ka hor. Nasiib wanaag wax dhimasho iyo dhaawac shacab ah kama aysan dhalanin qaraxaas,” ayay tiri Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen Axmed.
Qaraxa ayaa waxaa ka dhashay burbur xooggan oo soo gaar dhismayaashii ka ag dhawaa, waxaana la sheegayaa inuu ku dhexjiray qofkii waday gaariga markii uu qarxayey.
Dhanka kale waxeey Ciidamada amniga dileen labo ka tirsan Al Shabaab oo isku dayay in ay xoog ku soo maraan bar kontrool oo ay ciidanka ku leeyihiin Seybiyaano ee degmada Hodan.
Ugu dambeyntii,Taliye ku-xigeenka Ciidanka Boolska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Zakaye Xuseen Axmed ayaa si gaar ah ugu mahad celisay Shacabka Xogta la wadaagay Hay’adaha amniga ka dib markii ay Hay’adaha amniga horay digniin uga bixiyeen gaariga maanta Qarxay.
Akhriso: Axmed Madoobe oo saaray Amaro ka dhan ah Musharaxiinta kula tartami doonta Xilka Madaxwaynaha Jubland
February 27, 2019 February 27, 2019 Cali Yare
Dib u dhac ku yimid Shirka dib u eegista Dasturka
October 8, 2017 October 8, 2017 Cali Yare